Na-enyefe - ụlọ akwụkwọ asụsụ BLI na Canada
Ọrụ ntinye ụgbọ elu
Na BLI, anyị chọrọ ka ahụmahụ gị na mba ọzọ na-atọ ụtọ site na mbido mbụ ị rutere Canada. Anyị na-enye ọrụ nlekota aha ahaziri. Onye otu n'ime ndị nnọchianya gị ga-esote gị, ga-ahụ na ị ga-abata na ebe obibi gị ahọpụtara n'enweghị nsogbu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ a, biko mee ka anyị mara na ndebanye aha.
Na-abịa n'ọdụ ụgbọelu
Ụmụ akwụkwọ ụwa na-abata na Eluigwe nke Pierre-Elliott-Trudeau na Montreal na Ọdụ ụgbọ mmiri nke Jean Lesage na Quebec City. Mgbe ị rutere n'ọdụ ụgbọelu, jide n'aka na ị ga-aga nyocha nke ndị Alaka ka gị na onye ọrụ na-ahụ maka ọrụ ndị ọrụ Canada (CBSA) kwuo. Ọ bụ ebe a ka ha ga-achọ ịhụ paspọtụ gị, Akwụkwọ Ozibata na ihe akaebe nke ego, yana akwụkwọ edemede gị iji nweta akwụkwọ ikikere nkuzi.